ANP: UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-14 Septemba 2019	• 4 Comments
UDe Telegraaf utshintshe igama lakhe ngamanqaku ahlawulelweyo ukusuka 'ngaphezulu' ukuya 'kwi-premium'. Ukuba ufuna ukufunda ezi ndaba zizezakho, kufuneka uqale ube lilungu lephepha-ndaba elabhala lithanda indawo yokuhlala kwi '40 /' 45. Siyazi ngoku ukuba i-ANP isezandleni zikarhulumente u-John de Mol kunye […]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	28 Agasti 2019	• 3 Comments
Umbuzo ubusoloko undikhathaza okwethutyana: Ngaba uJohn de Mol ngoyena mhlekazi mkhulu eNetherlands? UJohn de Mol ungumnini we-ANP, i-Ofisi yeendaba yamaDatshi Jikelele kunye neTalpa Network, uqala ngoku uzibuza ukuba akanakho na ukusebenzisa iindlela ezifanayo ukuvelisa iindaba ezingezizo njengoko […]
Akunjalo ukuba ndibekho, kodwa kufuneka kuxoxwe: abezindaba beza kuzaliswa ngekhonsathi ehle kakhulu nguMarco Borsato eDe Kuip. Wonke amagama amakhulu namhlanje ayenayo: UDavina Michelle, Maan, André Hazes, uLil 'Kleine, uArmin van Buren kwaye mhlawumbi ndiya kulibala ezinye ezimbalwa. Kutheni [...]
Nabani olandele iimeko ze-Anne Faber kwaye usandul 'ukubona ukuba icala likaJulie van Espen eBelgium ezindabeni kufuneka liqaphele ukuba kukho imeko engafana nayo. Ukuba silandela imidiya, ezi ndaba ziphela inyaniso. Sifakwa imifanekiso [...]
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	6 Novemba 2018	• 11 Comments
Ukususela iimpendulo ezininzi ndafumana malunga abazingeli avela John de Mol yamemeza umatshini Imvume, apho Blogger ezininzi Ungazihluphi lamabango amalungelo mvume ukusebenzisa imifanekiso, kwabonakala luncedo kum ukuqala nesenzo counter. Nangona emva kweleta yokugqibela ndabhalela iRosmalen Nedland, abacebisi abazange bafumane impendulo, [...]
AmaDutch ahlakaniphe kakhulu kwihlabathi emva kweJapan ne-Finns. Oku kulinganiswa kwi-2016 kwaye ingxelo ingatholakala apha. Ubuhle kukuba siyazi nokuba sihlakaniphile kwaye awukwazi ukwenza nantoni na kuthi. Sinezinga eliphezulu lemfundo kwaye siyazi ukuba [...]
Kufakwe kuyo ANP, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	3 Julayi 2018	• 7 Comments
Izolo kwemini ndiye ndafumana impendulo evela abazingeli ANP avela John de Mol kaThixo (njengoko ndibize ukuba lula kodwa) PermissionMachine.com. Le nkampani ibonakala izingela wonke umntu othumele izithombe kwiwebhusayithi yakhe ngaphambili. Kwahamba kakuhle iminyaka engenazo izimvo okanye ingxaki [...]
Kufakwe kuyo ANP, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	1 Juni 2018	• 0 Comments
Emva kweempapasho zam malunga ne-ANP kunye 'nabazingeli abanomdla' ukusuka kwi-Permission Machine.com, ndafika kwisisombululo esinokuthi sinqande amabango esizayo. Ndizama ukufaka umfanekiso oqhotyoshelweyo kaJohn de Mol ngokuzithemba, nangona ndifumene ngeGoogle imifanekiso. Kule nqaku [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.936.431